Thwebula MiPony 3.0.6 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: MiPony
MiPony – an lula ukusebenzisa Finyelela kumphathi wokulayisha. I engavamile isofthiwe yikhono ukulanda idatha ngaphandle kwemingcele kusuka ezahlukene ikhokhwe amasevisi ifayela-ukwabelana. MiPony uyakwazi ukuphatha umkhawulo nsuku zonke, kukhethwa server, isikhathi sokulinda, okhiye ngibheka, njll Isofthiwe iqukethe esakhelwe browser lapho aqalaze site for ebukhoneni links esebenzayo futhi kwenza ukuba uzengeze thwebula emgqeni. MiPony inawo wonke amathuluzi ezidingekayo ukulungisa ezishintshayo lula thwebula inqubo.
Ukuxoxa nezinsizakalo eziningi ifayela-ukwabelana
Khansela ukulinganiselwa amasevisi ifayela-ukwabelana
Ukuhlanganisa izingxenye ifayela ephukile
Amazwana ku MiPony
MiPony software ehlobene
Isofthiwe ukuphatha amaqoqo izithombe namavidyo materials. Futhi isofthiwe kunikeza lula search futhi ububanzi amathuba ukucubungula amafayela.
I-LibreOffice – enye yama-analog eholayo neyamahhala ye-Microsoft Office. Isoftware isekela amafomethi athandwa kakhulu ukufeza ukuhambisana okuphezulu nezinye isoftware yehhovisi.